वडाध्यक्ष लिन्छन् करोड घुस, अख्तियार भन्छ : एक रुपैयाँ लिनेलाई पनि छाड्दैनौं | ehimalayan news portal
वडाध्यक्ष लिन्छन् करोड घुस, अख्तियार भन्छ : एक रुपैयाँ लिनेलाई पनि छाड्दैनौं
Breaking News, देश, नेपाल, मुख्य खबर, विचित्र संसार, समाज
स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको अख्तियारको ठहर
प्रकाशित मिति : २०७७, ११ श्रावण आईतवार १९ : ०५
काठमाडौं, ११ साउन । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका प्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरेले साना र ठूला मापन नगरी भ्रष्टाचारीलाई कारवाही गर्ने गरिएको बताएका छन्।
१ रुपैयाँ घुस खाने र अर्बौ रुपैयाँ खाने दुवै भ्रष्टाचारी भएकाले साना र ठूला मापन नगरी कारवाही गर्ने गरिएको उनले बताएका छन्।
‘एक रुपैयाँ घुस खाने भ्रष्टाचारी होस वा अर्बौ खाने भ्रष्टाचारी आयोगका दृष्टिकोणमा भ्रष्टाचारी नै हो। हामी कसैलाई साना र ठूला मापन गरेर हेर्दैनौँ,’ संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिमा भएको छलफलमा उनले भने।
प्रमुख आयुक्त घिमिरेले अहिले घुस लिने मोडालिटी समेत भ्रष्टाचारीहरुले परिवर्तन गर्ने गरेको बताए। कतिपय स्टिङ अपरेशनका क्रममा छिमेकी मुलुक भारतमा गएर घुस वापतको रकम लिने, अर्काको खातामा रकम जम्मा गर्न लगाउने प्रवृति देखिएको उनले बताए।
स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार बढेको पनि उनले बताएका छन्। एउटा वडाध्यक्षले समेत करोडमा घुस लिने सूचनाहरु आयोगसँग रहेको घिमिरेले बताएका छन्। ‘अहिले एउटा वडाध्यक्षले करोडमा घुस लिने सूचनाहरु हामीसँग छन्।
त्यो करोड एउटा नागरिकले कहाँबाट प्राप्त गर्ला? कहिलेकाँही स्टिङ अपरशेनका क्रममा आयोग आफैंले पैसा उपलब्ध गराउनुपर्ने अवस्था आउँछ’, उनले भने, ‘तर पछिल्लो समय घुसियाहरुको संगठनले स्टिङ अपरेशन चलाउनु हुँदैन भनेर सर्वोच्चमा मुद्दा हालेका छन्।
देशका वरिष्ठ कानुनविदहरु अहिले त्यो मुद्दा लडिरहेका छन्। हामी फेस गरिरहेका छौँ।’ प्रमुख आयुक्त घिमिरेले स्थानीय तहका जनप्रनिधिहरुको सम्पत्ति छानबिनमा आयोग सक्रिय रहेको बताए। उपभोक्ता समितिले ठेक्का लगाएर काम गराउने प्रवृतिले पनि भ्रष्टाचार बढाएको उनले बताए।
दाजु वडाध्यक्ष भाइ डोजर मालिक
एक्साभेटर चालक इञ्जिनियर भएर उनीहरुले आफ्नै डिजाइनमा जहाँ पनि चलाउने गरेको उनले उल्लेख गरे। ‘दाजु वडाध्यक्ष हुने भाइ स्काभेटरको मालिक हुने र काम सुरु गरिहाल्ने प्रवृति छ।
यस्तो अवस्था हुँदासमेत आयोग किन निर्मम ढंगले जान सकेन भन्‍ने प्रश्न उठ्ला? अहिले स्थानीय तह प्रदेश कानून निर्माणको चरणमा पनि छन्।
यो संक्रमणकालको अवस्थामा निर्मम ढंगले जाँदा प्रणालीमाथि प्रश्‍न उठ्ने होकी भन्‍ने चिन्ता छ’, उनले भने, ‘तर यसको अर्थ भ्रष्टाचारसँग अख्तियार सम्झौत किमार्थ गर्दैन।
अहिले पनि २ हजारबढी स्थानीय तहका विषयहरुमा अनुसन्धान भइरहेको छ।’ घिमिरेले सरकारलाई पटक पटक नीतिगत निर्णयको व्याख्या गर्न आग्रह गर्दा पनि सम्बोधन हुन नसकेको बताए।
भ्रष्टाचार अख्तियार एक्लैले नियन्त्रण गर्न सक्ने विषय नभएकाले सबैको एकिकृत र समन्वयात्मक प्रयत्‍न भए मात्रै न्यनूकरण गर्न सकिन बताए। कसैले भ्रष्टाचारलाई निर्मुला पार्छु भन्ने दावी गर्‍यो भने त्यो निरर्थक विषय भएको उनले बताए।
Newer Post‘CIAA should be allowed to investigate corruption in pvt sector’
Older Postपूर्व डिआईजी प्रकरणबारे सर्वोच्चले भन्योः श्रीमतीको हत्या भवितव्य मान्न मिल्दैन